NLD အစိုးရ ၈၈ လူထုတော်လှန်ရေးရဲ့ သွေးသစ္စာကို ဘယ်လောက် စောင့်တည်ခဲ့လဲ ? | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်းစုံ NLD အစိုးရ ၈၈ လူထုတော်လှန်ရေးရဲ့ သွေးသစ္စာကို ဘယ်လောက် စောင့်တည်ခဲ့လဲ ?
❖ ရှစ်လေးလုံး လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကနေ ပြည်သူလူထုက တောင်းဆိုလိုက်ကြတဲ့ တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ် ဖျက်သိမ်းရေး၊ တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့ တော်လှန်ရေးရဲ့ သွေးသစ္စာကို လူထုအစိုးရ ဘယ်လောက်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီလဲ။
❖ ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်ငံရေးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေကြတဲ့ အာဏာရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအပါအဝင် နိုင်ငံရေးအင်အားစုအသီးသီးရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျဉ်းမှာ ဒါတွေကို ဖော်ဆောင်ဖို့ နိုင်ငံရေးအရ ဘယ်လို မျှော်မှန်းချက်တွေ ရှိကြဖို့ လိုအပ်နေလဲဆိုတာ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေများနှင့် ဥပဒေအထောက်အကူပြုသူများအဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဌ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေကြီး ဦးကြီးမြင့်နဲ့ ကျွန်တော် အံ့ဘုန်းမြတ်တို့က ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Previous articleဖက်ဒရယ်စနစ်၊ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လောကိသီးသန့်ဝါဒ | ဗုဒ္ဓနည်းကျ နိုင်ငံရေး (အပိုင်း – ၁၅)
Next articleမြန်မာ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းမှသည် ပညာအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းဆီသို့ | ဗုဒ္ဓနည်းကျ နိုင်ငံရေး (အပိုင်း – ၁၆)